प्रदेश नं. १ मा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाई कार्यक्रम - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २२ चैत्र २०७६, शनिबार १७:०९
विराटनगर, २२ चैत । प्रदेश नं. १ मा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाई कार्यक्रम अर्थात ‘भर्चुअल कक्षा’ शुरु गरिएको छ ।
विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का कारण सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेपछि प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम शुरु गरेको छ । विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार अभियान अन्र्तगत चैत १७ गतेदेखि शुरु कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लाका १ सय विद्यालयका शिक्षक सहभागी भएका छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षक समाजसँगको सहकार्यमा शुरु ‘भर्चुअल कक्षा’ हरेक दिन २ घण्टा चल्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयले इ–लर्निङ तालिमको योजना बनाईरहेको समयमा देशव्यापी लक डाउन भएपछि ‘भर्चुअल कक्षा’ शुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो । ३ हजार शिक्षकलाई तालिम दिने तयारी भएपनि लकडाउनका कारण नसकीएको मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भर्चुअल कक्षामा प्रविधिमा आधारित फोकल शिक्षकलाई केन्द्रित गरिएको छ ।
मन्त्रालयले अहिले अनलाईन शिक्षाको प्रणाली विकास गरेर काम गरिरहेको मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । ‘भर्चुअल कक्षा’ लकडाउन जारी रहे सम्म हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ लकडाउन पछि पनि यसखाले शिक्षण विधिबारे हामीले सोचिरहेका छौं ।’ ‘भर्चुअल कक्षा’ले प्रदेश १ भरिका शिक्षकलाई लकडाउनका समयमा सहयोग पुगेको मन्त्री घिमिरेको भनाई छ ।
दैनिक कक्षा सम्पन्न भएपछि सूचना प्रविधि विज्ञले सुझाव दिने गरेका छन् । काठमाण्डौंमा रहेका प्रविधि विज्ञ डा. दोभान राई र मनोज घिमिरेले सुझाव दिने गरेका छन् ।
विराटनगर, १५ साउन । कोशी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत थप दुई जना स्वास्थ्यकर्मीमा विहिबार कोरोना संक्रमण...